Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) - 4Kzuo
IMDb 7.3 🗽 1h 59min | Action, Adventure, Comedy | 20 December 2017 (USA)
ဇာတ်လမ်းအဓိကအကြောင်းအရာကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးလေးယောက် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားကာ ဂျူမန်းဂျိ ကမ္ဘာထဲရောက်သွားပြီး စွန့်စားခန်းမျိုးစုံ ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ အကြောင်းလေး တင်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။၁၉၉၆ ကာလက အဲလက်စ် ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင် လေးဟာ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းဘုတ်ပြား လေးကို ကမ်းခြေနားက ကောက်ရ ခဲ့ပေမယ့် ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေပဲ ကစား ဖြစ်နေတာမို့ ဂိမ်းမကစားဖြစ်ဘဲ သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ် ညမှာ ဂျူမန်းဂျိဘုတ်ပြားထဲက ဂိမ်းတွေဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး အဲလက်စ်က ဂိမ်း စက်ဖွင့်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ သူပါပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
နှစ် ၂၀ လောက်ကြာခဲ့ပြီး နောက်မှာတော့ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းစက် က ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ စပန် ဆာ၊ ဘယ်သန်နီ၊ မာသာနဲ့ ဖရစ်ဂ်ျဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လေးယောက် အခန်းထဲက အရှုပ်တွေကို ရှင်းရင်းနဲ့ ဂျူမန်းဂျိဂိမ်းစက်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ လက်ထဲရောက်လာတဲ့ အသစ်အဆန်းဆို စူးစမ်းချင်တဲ့ သူတို့တွေ ဂိမ်းစက်ကိုဖွင့်ဆော့ရင်း ဗီဒီယိုဂိမ်းထဲ ရောက်သွားပါတော့တယ်။ဂိမ်းထဲမှာ အပြင်ကလူတွေ မဟုတ်တော့ဘဲ သူတို့ရွေးလိုက် တဲ့ ဇာတ်ကောင်အလိုက် ကိုယ် စားပြုဂိမ်းဇာတ်ကောင်တွေအဖြစ် ပြောင်းသွားပြီး လှုပ်ရှားရပါတော့တယ်။ Welcome to the Jungle ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ တောနက်ထဲကို ရောက်သွားကြတဲ့ သူတို့လေး ယောက် လမ်းခရီးတစ်လျှောက် စွန့်စားခန်းမျိုးစုံနဲ့ ကြုံခဲ့ကြရပြီး အန္တရာယ်ခရီးကြမ်းတွေကို တက် ညီလက်ညီ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
Zညွန်းကို 7daydaily မှကူးယူဖော်ပြသည်
📤Download And Watch HD Myanmar 992MB(Sub)📥
📤Download And Watch Myanmar (Sub)📥
Eternal Wave / 密战 (2017)
PG Love / PG 恋爱指引 (2016)
Wolf Warriors / 战狼 (2015)
Heart Blackened / 침묵 (2017)
Tokyo Ghoul / 東京喰種 (2017)
Bleeding Steel / 機器之血(2017)
Night Peacock / 夜孔雀 (2016)
Naked Killer / 赤裸羔羊(1992)
For Your Eyes Only (1981) 007
Teacher’s Diary / คิดถึงวิทยา (2014)
13 Reasons Why ( 2017 / ) TV Series
Explosion / 引爆者 (2017)
Moonraker (1979) 007
Because I Love You / 사랑하기 때문에(2017)
Fabricated City / 조작된 도시(2017)
The Golden Monk / 降魔传 (2017)
The Legend of Drunken Master / 醉拳二 (1994)
Real / 리얼 (2017)
Mad Mission 1 / 最佳拍檔系列 1 (1982)
Mad Mission Part 2: Aces Go Places / 最佳拍檔大顯神通 (19...
周杰倫 Jay Chou (with 楊瑞代)【等你下課 Waiting For You】歌詞版MV...
Mad Mission 3: Our Man from Bond Street / 最佳拍档3：女皇...
Mad Mission 4: You Never Die Twice / 最佳拍档4：千里救差婆(1...
Mad Mission V: The Terracotta Hit / 新最佳拍档 新最佳拍檔 (...
Taylor Swift - End Game ft. Ed Sheeran, Future M...
Pacific Rim: Uprising Trailer #1 (2018) | Moviecli...
HOTEL TRANSYLVANIA3Official Trailer #1 (2018) An...
SPARK | Official Trailer (2017) Blockbuster Animat...
Avengers: Infinity War - Official Trailer (2018) M...
[MV] HyunA(현아) _ Red(빨개요) Music
魍美 (Net I Die) สวยตายล่ะมึง (2017) (Official Trail...
Replicas (2018) (Official Trailer)
Paddington2(2018) | Trailer
你在哪 (2017) Breathing
MONSTER HUNT2Official Trailer (2018) Fantasy Act...
JOURNEY TO CHINA Trailer2(2018) Jackie Chan,Arno...